Shirkadda Isgaadhsiinta Ee Telesom Oo Jaamacadda Hargeysa Maanta Ku Wareejisay Dhisme Iyo Qalab ay Ku Baxday Aduun Gaadhaya Boqol Kun Oo Dollar+Daawo Sawiradda(Hadhwanaagnews) Wednesday, June 20, 2012 Hargeysa (HWN) Maamulka Shirkadda Isgaadhsiinta ee Telesom ayaa maanta dhisme cusub oo ay ugu talo galeen Qaybta ICT-ga J iyo qalab ku wareejisay Jaamacadda Hargeysa.
Hargeysa (HWN) Maamulka Shirkadda Isgaadhsiinta ee Telesom ayaa maanta dhisme cusub oo ay ugu talo galeen Qaybta ICT-ga J iyo qalab ku wareejisay Jaamacadda Hargeysa.
Xaflad balaadhan oo loo sameeyay wareejinta dhismahan iyo qalabka oo lagu qabtay Xarunta Jaamacadda Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay Wasiiradda Waxbarashadda, Diinta iyo Awqaafta, Dhalinyaradda iyo ciyaaraha, Ganacsiga, Boosaha iyo Isgaadhsiinta, Agaasimaha Tacliinta Sare, Xoghayaha guud ee Kulmiye, culimaa udiin, maamulka shirkadda Teleosom iyo marti sharaf aad u u tiro badan.
Hadal kooban oo uu furitaankii wareejinta dhismaha cusub iyo qalabka ay shirkadda Telesom ugu deeqday jaamacadda Hargeysa ka soo jeediyay Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Aadan Siiro) ayaa waxa uu sheegay in uu la dhacsan yahay hanaanka wax soo celinta ah ee shirkada Telesom.
Waxa uu ilaahay uga baryay maamulka shirkadaasi in uu maalka iyo dedaalkoodaba u barakeeyo Anigu waligayba shirkadda telesom ayaan ahaa, waxaanan halkan uga mahad celinayaa maamulka shirkadaas oo inta badan ka shaqeeya horumarka, waxaanan ilaahay uga baryayaa in uu maalkooda u barakeeyo ayuu yidhi Sheekh Aadan.
Dhismahan iyo qalabkan ay maanta shirkadda Telesom ku wareejinayso jaamacadda Hargeysa waxa ay qayb ka tahay waxqabadka lagu faani karo ee ay shirkadda Telesom dadkeeda u qabatay ayuu yidhi.
Suldaan Maxamed Ibraahim oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee shirkadda Telesom oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in shirkaddu ay tahay mid la wada leeyahay saamilayda wax ku lihina ay gaadhayso ilaa 1500 oo qof.
Shirkadda Telesom waa mid la wada leeyahay, inta saamiga lihina waxa ay kor u dhaafaysaa ilaa 1500 oo qof, markaa waad garan kartaan horumarka ay ku talaabsatay, waayo intaas oo qof ayaa wax ku leh
Wuu sii watay hadalkiisa waxaanu yidhi Jaamacaddaha dalka oo dhan uma yaraysano oo wax ayaanu ka qabanaa ha ugu badnaato jaamacadda Hargeysa oo marka laga tago dhismeha, waxa nooga soo qalin jabiyay arday badan oo aanu gacanta ku haynay, sidoo kale waxa dhismahan aanu maanta ku wareejinayno waxa aanu ku maal gelinay lacag gaadhaysa boqol kun oo dollar.
Waxa ay shirkada Telesom gaadhi landcruiser ah u iibisay Jaamacadda Nugaal, waxa ay dhistay wadada isku xidhaysa Jaamacadda Camuud iyo Boorama, waxa ay gacan ka geysatay wadada wajaale, wadada Dawgacad iyo abaaraha ka jira goboladda galbeedka ayuu yidhi.
Deanka Kulliyadda ICT-ga jaamacadda Hargeysa Prof. Ceelaabe oo isna halkaasi ka hadlay ayaa uga mahad celiyay Shirkadda Isgaadhsiinta Qalabkan cusub ee ay soo gaadhsiisay kulliyadda ICT-ga iyo waliba dhismaha cusub, waxaanu carabka ku dhuftay in qalabka ay shirkadda Telesom ugu deeqday Kulliyadda ICT-gu uu yahay mid dhif iyo naadir ah, marka Somaliland iyo Somali la isku qaadana noqonaya kii ugu horeeyay ee dalka la keeno.
Guddoomiyaha Jaamacadda Hargeysa Muuse Aadan ayaa isna mahadnaq balaadhan u soo jeediyay Shirkadda Isgaadhsiinta ee Telesom, waxaanu yidhi
Jaamacadda Hargeysa waa tii labaad ee dalka laga hirgeliyo dhulkeena, waa jaamacad ay dadweynuhu qayb weyn ka qaateen dhiskeeda iyo bilawgeeda, Halkan waxa iyaduna fadhida Wasiirka Waxbarashadda Marwo Samsam Cabdi aadan oo iyadu ahayd qofkii ugu horeeyay ee xaadha Jaamacadda Hargeysa ee aasaaskii ugu horeeyay dhigay.
Jaamacaddan dawladda ayaa iska leh oo dadweyneha ayaa bilaabay, maalinba-maalinta ka dambaysana waxbaa u kordha waxaana taas dareemi kara qofkii ogaa halkii wax laga soo bilaabay,
Aniga oo ku hadlaya afka maamulka, ardayda iyo macalimiinta jaamacadda Hargeysa waan ka guddoomay shirkadda Isgaadhsiinta ee Telesom dhismahan iyo waliba qalabkaba, waana mid aanu abaalkeeda ugu hayn doono ayuu yidhi.
Khadar Axmed Diiriye Agaasimaha guud ee Tacliinta Sare oo isna madashaas kalmado kooban ka soo jeediyay ayaa xusay in wax lagu farxo ay tahay in jaamacadda Hargeysa la isugu daro dhimse iyo waliba qalab Waan soo dhaweynaynaa in shirkadda Isgaadhsiinta ee Telesom ay Jaamacadda Hargeysa ugu deeqdo dhismahan quruxda badan iyo waliba qalabkii lagu shaqaynayay, waxaanan ilaahay uga baryayaa shirkadaas in uu maalkeeda u barakeeyo ayuu yidhi.
Gabogabadiina Wasiirka Wasaaradda Waxbarashadda Iyo Tacliinta Sare Marwo Samsam Cabdi Aadan oo munaasibadaasi ka hadashay ayaa sheegtay in ay farxad gelinayso in shirkadda Isgaadhsiinta ee Telesom ay ugu deeqdo jaamacadda Hargeysa Dhisme iyo waliba qalab.
Runtii shirkadda Telesom oo dhisme aad u qurux badan iyo waliba qalab ugu deeqday jaamacadda Hargeysa waan u mahad celinaynaa, waxa wanaagsan in aynu dalkeena horumarkiisa iska kaashano, waxaanan ka soo bilawnay meel la wada og yahay, waxa jirtay iyada oo daasado lagu fadhiyo horumarka aynu gaadhnay waxa uu u baahan yahay in la inagaga daydo. Ayay tidhi Marwo Samsam Cabdi Aadan.
Waxa ay intaasi ku dartay oo ay tidhi Aad baan ugu mahad celinayaa shirkadda Telesom oo xaflad wal oo aan tagoba iyadu kaw ka ah, dhinaca waxbarashaddana inta ay la qabatay lama soo koobi karo, waana mid ay ku amaanan tahay ilaahayna waxa aan uga baryayaa in halkii ay ka soo saareen uu ugu bedel wax ka khayr badan ayay hadalkeeda ku soo koobtay.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />